Synephrine အမှုန့် (94-07-5) hplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Synephrine အမှုန့်
SKU: 94-07-5. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Synephrine အမှုန့် (94-07-5) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ကုန်ကြမ်း Synephrine အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Synephrine အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 187 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Synephrine အမှုန့်
Synephrine အမှုန့်များကြောင့်ကြောင့်ဦးနှောက်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် nootropic ဖြစ်စဉ်းစားသောသဘာဝကျကျ occuring alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျ Synephrine အမှုန့်ဓါတ်ဖြည့်စွက်မှာတွေ့ရှိအထူးသအများဆုံး Synephrine အမှုန့်ကပိုလေ့ခါးသီးသောလိမ္မော်ရောင်ထုတ်ယူအဖြစ်လူသိများသည့်၏ Citrus Aurantium စက်ရုံထဲကနေထုတ်ယူနဲ့ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်, အချို့အပင်များနှင့်သတ္တဝါများကိုတွေ့ရပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Synephrine အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Synephrine အမှုန့်များ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့်စွမ်းအင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏အားသာချက်ယူပါကအကောင်းဆုံးနံနက်သို့မဟုတ် 15 အတွက်ပထမဦးဆုံးအရာခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် - လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီ 30 မိနစ်။ pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် Synephrine အမှုန့်ပါဝင်သောအဆီဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီရေနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ အများဆုံးထိရောက်မှုထိုး 15 ဖြစ်ပါသည် - အစေခံတစ်ဦးလျှင် 25 မီလီဂရမ်။
အဘယ်အရာကိုရလဒ်များအမျိုးအစားများငါရော် Synephrine အမှုန့်ကနေမျှော်လင့်နေရမည်
အားလုံးသဘာဝအလျောက်ဖြည့်စွက်ကဲ့သို့ပင် Synephrine အမှုန့်အပေါ်လက်တွေ့မမြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များ pin ပါဘူး။
သူကပြောပါတယ်, ဒီမှာသင် Synephrine အမှုန့်ဖြည့်စွက်ခြင်းမှမြျှောလငျ့နိုငျတယျ:
သင့်ရဲ့ Basal ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမှာတစ်ဦးအနည်းငယ်တိုး။
အဆီစည်းရုံးခြင်းတားဆီးကြောင်းအဆီကလာပ်စည်း receptors များ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်တစ်ဦးကအနည်းငယ်လျော့ကျ။
အစားအစာများ၏ thermic အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်တစ်ဦးကအနည်းငယ်တိုး, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက် metabolizing ၏ 'စွမ်းအင်ကုန်ကျ' '။
သင်တို့ရှိသမျှကို sexy အသံမပါဘူးဆိုရင်, ငါနားလည်ပါတယ်။ ထိုသို့နဲ့တူလို့ကတောင်းဆိုတာပါ။
ဒါကြောင့်သင်က syneprhine နှင့်အတူဖြည့်စွက်မထားသင့်ဟုမဆိုလိုပါကပြောသည်။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုမြင်ချင်လျှင်သင် Synephrine အမှုန့်နှင့်အတူသာဖြည့်စွက်မထားသငျ့ကိုဆိုလိုသည်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့အသုံးပြုပုံတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့အတွင်းဖြစ်ကြသည်။ သော်လည်းအတူတကွလက်ျာမြားကို ယူ. , တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသက်ရောက်မှုသိသာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ naringin နှင့် hesperidin နှင့်အတူ Synephrine အမှုန့်တွဲလျှင်ဥပမာ, သင်ဇီဝဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှုသုံးဆနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာဖိန်းဓာတ်ကိုထည့်သွင်းလျှင်, သက်ရောက်မှု ပို. ပင်သိသာဖြစ်လာသည်။
သငျသညျ (နှင့်အထူးသဖြင့်အထဲကအလုပ်လုပ်မတိုင်မီ) နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဤတရားလေးပါးဖြည့်စွက်ယူလျှင်အမှန်တကယ်အဆီဆုံးရှုံးမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကတစ်ပတ်ကိုအဆီဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုထပ်တိုး 0.5 ပေါင်ယူဆဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
(ငါသည်သင်တို့ကိုရောနှောသို့ yohimbine add အခါသင်အထူးသဖြင့်-ပင်ပိုမိုမြန်ဆန်အတွက်အဆီနှင့်ခေါင်းမာကောင်ဆီဥကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ )
ကုန်ကြမ်း Synephrine အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းရန်စွမ်းရည်အပြင် Synephrine အမှုန့်အဆီသူ့ဟာသူရှို့နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏သုညသက်သေအထောက်အထားပြသထားတယ်။ ထို့ကြောင့်, Synephrine အမှုန့်တစ်ဦးအဆီ burner ဖြစ်စဉ်းစားမရပါ။ သငျသညျပိုရှည်ဘို့ခဝါသည်ရှိနေဆဲနှင့်သင့်နေ့စဉ်နည်းလမ်းထက်ကျော်လွန်စားရန်နီးပါးသုညအလိုဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သော်လည်းတစ်ဦးအဆီ burner နှင့်အတူ Synephrine အမှုန့်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်လျော့နည်းသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအတွင်းရေစာမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်စျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးဖြည့်စွက်မယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်သော်လည်းယူသင့်တယ်မဆိုလိုပါ။ Synephrine အမှုန့်နေဆဲစမ်းသပ်လျှက်နှင့်အချို့သောရလဒ်များကိုကိုလောင်အခါ, ထိုသို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့ခြင်း, စိတ်ဆိုးအစာအိမ်ခံစားချက်တွေကိုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်နိုင်သည်ကိုပြသပါ။ နောက်ပိုင်း Synephrine အမှုန့်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများ၏အန္တရာယ်မှာရှိသည်သို့မဟုတ်နေသောသူတို့က, နှလုံးရောဂါမိသားစုသမိုင်းရှိသည်သော, တစ်လှုံ့ဆော်ဖြစ်စဉ်းစားသည်သို့မဟုတ်ပင်သင်ကဲ့သို့ဒီထုတ်ကုန်တာကိုရှောင်ရှားသင့်ကြောင်းလေဖြတ်, ရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းသတိပေးရန်၎င်း၏လည်းတရားမျှတသော ကအနည်းငယ်နှလုံးခုန်နှုန်းခြီးမွှောပါဘူးကတည်းကကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်အန္တရာယ်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
ဒီတော့အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုကို, သင် Syneprhine ယူပြီးသင့်သနည်း သင်တစ်ဦးဖန်းဂတ်စ်အသားအရေပိုးကူးစက်မှုဆက်ဆံဖို့ကအသုံးပြုနေသည်မဟုတ်လျှင်ရိုးရိုးသားသား, ငါသည်တဦးတည်းအားလုံးမှာဒီဖြည့်စွက်စားသုံးသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ကြည့်ပါ။ သငျသညျ synpehrine ယူမယ့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Practitioner နေဖြင့်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်အန္တရာယ်များသည်သင်တို့အားပူဇော်နိုင်ပါတယ်အလားအလာဆုလာဘ်စဉ်းစားတာများလွန်းအမြင့်ရှိသည်အတိုင်း, ရိုးရှင်းစွာဝေးကနေနေဖို့။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင်သည်အဘယ်သို့သင့်မပြောနိုင်နှင့်ယူမထားသင့်ပေမဲ့လည်းငါပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်သည်နောက်ဆုံးမှာကောင်းသောထက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုအန္တရာယ်လုပ်နေတာတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်, သင်တို့လည်းညွှန်ကြားကြသည်မဟုတ်သည့်အခါဒီထုတ်ကုန်စားသုံးနေဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်။
သငျသညျအဖြေများအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိန်းကျင်ပြီးမှလျှင်, သင် Synephrine အမှုန့်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, မပျက်, နှလုံးရောဂါ, လေဖြတ်ခြင်းနှင့်များအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်မဆိုးရွားသတိပေးချက်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် '' တခြားဆိုးဆိုးဝါးဝါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။ '
ကောင်းပြီ, အတော်ကြာလေ့လာမှုများ Synephrine အမှုန့်သွေးဖိအားကိုတိုးပွါးတော်မမူကြောင်းသရုပ်ပြကြနှင့်သုတေသနကယေဘုယျအားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာနှင့်ကောင်းစွာဒဏ်ခံကြောင်းပြသထားတယ်။
သငျသညျ Synephrine အမှုန့်ကိုယူတဲ့အခါသင်လူအများစုနဲ့တူနေလျှင်အဖြစ်မှန်, သင်အများကြီးသတိထားမိသွားမရင့်ဖြစ်ပါတယ်အများစုကယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ကြွဆေး (Jitter, ပျို့, လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်, စတာတွေနဲ့အတူဆက်စပ်အားနည်းချက်တွေအဘယ်သူအားမျှနှင့်အတူစွမ်းအင်အတွက်အနည်းငယ်တိုးလာသတင်းပို့ ) ။
အဲဒီသင်တန်း၏, သင်သည်မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများရှိသည်သို့မဟုတ် Synephrine အမှုန့်နှင့်အတူဖြည့်စွက် contraindicate အံ့သောငှါမဆိုဆေးကိုယူလျှင်, အသုံးမပြုခင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကပြောသည်။ ဥပမာမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, Anti-စိတ်ကျရောဂါနှင့် HIV / AIDS ရောဂါဖြစ်ကြသည်။
Synephrine အမှုန့်, ဒါမှမဟုတ်သိပိုပြီးလေ့သည်အတိုင်း, ခါးသီးသောလိမ္မော်ရောင်, အရွက်, အသီးများနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆေးဝါးအောင်ဖို့အသုံးပြုနှင့်ခွံသူ့ဟာသူရေနံအောင်ကိုအသုံးပြုသည်ရှိကြသည့်အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ခါးသောလိမ္မော်ရောင်၏ရေနံထိုကဲ့သို့သောပွေးနှင့်အားကစားသမားများခြေလျင်အဖြစ်ကူးစက်မှု, ပြုမူဆက်ဆံကူညီရန်အရေပြားမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
များစွာသောလေ့လာမှုတွေနေဆဲကောက်ယူလျက်ရှိသည်သော်လည်း, တစ်စုံတစ်ဦးကခါးသီးလိမ္မော်သီးတစ်လုံလောက်သောငွေပမာဏကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာ, ကအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်နိုင်စွမ်း posses ကြောင်းပြသရန်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာစားသုံးသူအများကြီးပိုရှည်များအတွက်အပြည့်အဝခံစားရနှင့်မတရားသောသို့မဟုတ်အပိုအစားအစာကိုစားသုံးရန်အလိုဆန္ဒများအတွက်တစ်စုံတစ်ရာသွေးဆောင်မှုလျော့နည်းစေအောင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတည်မြဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးအဖြစ် Synephrine အမှုန့်သည်အသုံးပြုသူများအကြားကိုယ်အလေးချိန်လက္ခဏာကိုပြသနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဒီထက်အစားအစာစားသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အလှည့်အတွက်, အချိန်တစ်ကာလအတွင်းကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ရလဒ်များအရာလျော့နည်းကယ်လိုရီ, စားသုံးကြသည်။
Synephrine ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Synephrine အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Synephrine အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်စနစ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း skype ကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် (CSR) ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် 1.To ။
Synephrine ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
ဆုံးရှုံးအလေးချိန်များအတွက် Synephrine အမှုန့်ကိုကူညီသလား